ICyberdyne manje inokukhanya okuluhlaza okokukhangisa ngezimboni zayo ezilawulwa yingqondo | Izindaba zamagajethi
ICyberdyne manje isinokukhanya okuluhlaza okwenzela ukumaketha izinto ezingaphandle ezilawulwa yingqondo
ICyberdyne iyinkampani ezinze eJapan eminyakeni embalwa eyedlule yaziwa emhlabeni wonke ngenxa yamaphrojekthi ahlukahlukene amarobhothi akwazi ukusiza emisebenzini yokunakekela asebekhulile. Kulokhu kufanele sengeze iphrojekthi abaphathi bayo ababhapathiza ngegama layo I-Hybrid Assitive Limb o HALSiyakhuluma, njengoba ubona esithombeni esitholakala phezulu phezulu kwalokhu okuthunyelwe, kwesikhala esivelele ukuthi sithuthuke kakhulu kwezobuchwepheshe kunalokho ongakucabanga.
Ngaphambi kokungena emininingwaneni eminingi, ngikukhumbuze ukuthi besiyazi ngempela i-HAL iminyaka eminingi selokhu uCyberdyne wethule i prototype yokuqala, ngaleso sikhathi bekubonakala ngathi sekuthuthukile impela, emuva 2011. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube yileso sikhathi, onjiniyela bayo bebelokhu besebenza ukuyiphelelisa ngokusebenza kwangempela engakunikeza kanye nokuyiguqula ukuze iziphathimandla zinikeze inkampani ilambu eliluhlaza ukuze iqale ukuthengiswa, into ethi akukaze kwenzeke kuze kube yilezi zinsuku.
1 Yazi i-HAL kangcono kancane, i-exoskeleton ongayilawula ngengqondo yakho
2 Yini okuhlinzekwa yi-HAL futhi yehluke kanjani kwamanye ama-exoskeleton emakethe?
Yazi i-HAL kangcono kancane, i-exoskeleton ongayilawula ngengqondo yakho
Njengoba uCyberdyne esho kuwebhusayithi yayo esemthethweni, ngokusobala umqondo wokwenziwa kwe-HAL, ekuqaleni kwayo, wawwehluke kakhulu kuphrojekthi esiyaziyo namuhla njengoba lesi sakhiwo sasivezwa njenge ipulatifomu engasetshenziswa emisebenzini lapho ukusetshenziswa kwamandla bekuyinto eza kuqala. Njengoba ubona, le ndlela, ngesikhathi esithile ekukhuleni kwayo, iguqulwe ngokuphelele ngoba abaphathi bephrojekthi banqume ukuthi kungabathakazelisa kakhulu ukunikela ngesiphephelo esingaba wusizo ezigulini ezinokulimala emgogodleni wazo.
Uma sigxila kulokho i-HAL, i-exberkelene yaseCyberdyne, engakunikeza, sikhuluma ngohlobo lwesistimu olukhetheke kakhulu, njengalokho noma yimuphi umsebenzisi angayilawula ngengqondo yakhe. Akungabazeki ukuthi iyimpahla engaphezu kokuthakazelisa futhi, ngaphandle kokucabanga kakhulu, kwenzeka kithi ukuthi ukusetshenziswa kwayo kungaba ngaphezu kokuthakazelisa kuzo zonke lezo ziguli ezihlushwa uhlobo oluthile lokulimala emgogodleni wazo futhi nge-HAL ezingabuyela ukuhamba bese behamba ngemilenze yabo.
Njengamanje, iqiniso ukuthi kunamaphrojekthi amaningi, adalwe futhi athuthukiswa yizinkampani ezahlukahlukene, ezifuna ukudala leso sikhangiso esivelele kwezinye. Okwamanje, kunokuba senze inkosi yaziwe kulo mkhakha, singasho ukuthi kunezinketho eziningi nokuthi, kuya ngohlobo lomsebenzi ozokwenziwa, inketho eyodwa izothakazelisa kakhulu kunenye. Kuzo zonke lezi zinketho manje kufanele sengeze i-HAL, uhlelo ukuthi Ingasebenza ngaphandle kwesidingo sokulawulwa yinoma yiluphi uhlobo lokulawula noma izinti zokuthokozisa ngoba kunesidingo sokuyixhuma kuphela emqondweni wesiguli ukuze sisebenze.
Yini okuhlinzekwa yi-HAL futhi yehluke kanjani kwamanye ama-exoskeleton emakethe?
Njengoba ukwazi ukubona kumavidiyo asatshalaliswa yilokhu kufakwa okufanayo, umsebenzisi uzokwazi ukusebenzisa i-HAL inqobo nje uma othile ezomsiza ukuyilungisa emilenzeni yakhe nasesiswini. Ukusuka lapho futhi sibonga i-exoskeleton inezinzwa ze-electroencephalography, ingathatha amasignali wezinzwa ebuchosheni bomsebenzisi ngesikhumba yodwa. Ngenxa yalezi zimpawu, noma ngubani angenza i-exoskeleton ihambe ngokwemvelo futhi ngaphandle kosizo olwengeziwe.
Kuleli qophelo, ngikutshele ukuthi, njengoba kumenyezelwe yinkampani yaseJapan uqobo, kubonakala sengathi i-HAL ingasetshenziswa kuphela yiziguli ezike zahamba phambilini njengoba isiguli sidinga ukwazi ukuthi inqubo yokunyakaza komlenze iqukethe ini. Uma kwenzeka ungaba nentshisekelo kumkhiqizo ofana nalona, ​​vele ukutshele ukuthi, okwamanje, i-HAL isivele iyathengiswa eJapan ngentengo cishe i-1.600 euros Ngenkathi, ngokusho kwenkampani uqobo, kubonakala sengathi basezingxoxweni nezikhungo zokuhlumelelisa eJalimane, eSweden nakwamanye amazwe aseYurophu ukunikela nge-HAL ezigulini zabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » I-Robotics » ICyberdyne manje isinokukhanya okuluhlaza okwenzela ukumaketha izinto ezingaphandle ezilawulwa yingqondo
Ungayilanda kanjani futhi uyifake i-PUBG Mobile Game ku-iOS
Ungasifaka kanjani isandiso se-Chrome kuFirefox